Björnnässlingan | Vakashela uHultsfred
umphetho » 🥾 Bona futhi wenze » 👟 Imisebenzi » U-Andra Ukuhamba » Björnnässlingan
2 noma 3,5km
IBjörnnässlingan ihlathi lomlingo langempela elinemiphini emidala emile izungeze amadwala ambozwe ngofele. Isiqiwu semvelo seBjörnnäset sisezindaweni eziyinhloko e-Åkebosjön. Lesi siqiwi sisezindaweni zokongiwa kwemvelo nezokudoba kukaStora Hammarsjön ngaphandle nje kwaseHultsfred. Lapha, izihlahla zivunyelwe ukuthi zikhule ngokuthula kumahlathi anamuhla. Ungakhetha ukuhamba ibanga lamakhilomitha ama-2 noma ama-3,5, womabili ezindaweni ezinamagquma.
Isikhathi sehlathi siphakathi kweminyaka eyi-100 nengu-150. Endaweni kukhona kokubili i-capercaillie ne-black grouse. Le ndawo ivakashelwa futhi ngabasiki bethu bezinkuni abaningana, kufaka phakathi igwababa elikhulu lemfucumfucu emnyama.
Inethi yebhele eGaia
IBjörnnässlingan eHiking Project
Imbabazane yebhere kumephu yemvelo
Imbabazane yebhele ku-Wikiloc
570 81 UJärnforsen, Sweden
9 izibuyekezo ku-Google
5/5 izinyanga 2 ezidlule
Mina, vir ngivame ukuba khona😃. Ofuna ukuthula nokuthula ukhona😃
5/5 izinyanga 11 ezidlule
Ukunyuka okuhle ngokungalindelekile! Enye yezintandokazi endaweni yaseVetlanda / Målilla. Indlela egcinwe kahle, ihlathi elihle ngokumangalisayo ngamatshe aphonswe phakathi. Kukhona umbukiso we-lichen maphakathi. Kuhle! Izingxenye zendlela zidlula engxenyeni yehlathi elishile. Isipiliyoni esihle sokubona okusindayo nokuthi imvelo ilulama kanjani. Futhi kuwo wonke ama-blueberries kanye ne "rock castle" maphakathi okuyindawo enhle yekhofi.
IBjörnnässlingan iluphu enhle esebenza esiqiwini semvelo saseBjörnnäset
U-Erik van de Loo
Umgwaqo omuhle, okhonjiswe kahle indlela yokuhamba.
5/5 izinyanga 8 ezidlule
Umzila omuhle kakhulu wokuqwala intaba nesigodi eduze kwamachibi amabili kanye namawa aphithene